မအေးသောင်းက အလံပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်လို့ ဝေဖန်ကြတဲ့ အပေါ် ပြန်လည်ဖြေရှင်းထားပါတယ်…. - Zeekwat Hot News
မအေးသောင်းက အလံပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်လို့ ဝေဖန်ကြတဲ့ အပေါ် ပြန်လည်ဖြေရှင်းထားပါတယ်….
July 8, 201901915
မြန်မာလူမျိုးတွေက တန်ဖိုးထားချစ်မြတ်နိုးတဲ့ ပုဂံကတော့ အခုဆိုရင် ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်စာရင်းဝင်သွားခဲ့ပါပြီ။တစ်နိုင်ငံ လုံး ကလည်း အရမ်းကို ပျော်ရွှင်နေကြပါတယ်။အဇာဘိုင်ဂျန်မှာ ကျင်းပတဲ့ ၄၃ ကြိမ်မြောက် ယူနက်စကိုအစည်း အဝေးကိုတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် မအေးသောင်းက တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ပျော်စရာ သတင်းကော င်းကို လည်း မအေးသောင်းက သူမရဲ့ fb မှာရှယ်ထားပါတယ်။အစည်း အဝေးတက်ရောက်ဖြစ်တဲ့ မှေတ်တမ်းပုံတွေကို တောက်လျောက်တင်ထားပါတယ်။
Photo : Aye Wutyi Thaung fb
၄၃ ကြိမ်မြောက် ယူနက်စကို
မြန်မာတွေရဲ့ နှလုံးသားထဲက ပုဂံရဲ့
အကောင်းဆုံးသတင်းကိုလည်းရင်ခုန်နေပါတယ်…” ဆိုပြီး သူမရဲ့ အကောင့််မှာ တင်ထားခဲ့တာပါ။
ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်အဖြစ် ကြေညာခဲ့တဲ့ နေ့လေးမှာတော့ မအေးသောင်းက ပုဂံရဲ့ အငွေ့အသက်တွေ လွှမ်း ခြုံ နေတဲ့ ၀တ်စုံလေးကို ၀တ်ဆင်ပြီး တက်ရောက်ခဲ့တာပါ။မအေးသောင်းကလည်း အရမ်းတွေ ပျော်ပြီး အမှတ်တရ ပုံလေးတွေ ကို သူမရဲ့အကောင့်မှာ ဝေမျှခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာ အလံက အပေါ်အောက်ပြောင်းပြန် ဖြစ်နေတာကို မြင်လိုက် မိတဲ့ သူတစ်ချို့က ဘာကြောင့် အခုလို ပြောင်းပြန်ဖြစ်ရတာလဲ ဆိုပြီး ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလို ပြောဆို ဝေဖန် မှုတွေ ကို မအေး သောင်းက Comment မှာ အခုလို ပြန်ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
Pin Type ရင်ထိုးကြောင့်ပါ။
မမြှောက်ခင်မှာတောင် အလံကို ပေါင်ပေါ်တင်မထားတာတို့
အဝါကိုအပေါ်ဘက်မမှားအောင်တို့ကို တအားဂရုစိုက်ပီး လုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေပါ….” ဆိုပြီး အခုလို ဖြစ်ရတာဟာ Pin Type ရင်ထိုးကြောင့်ပါ လို့ သေချာ ပြန်ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
Source : Aye Wutyi Thaung fb
မှနမြာလူမွိုးတှကေ တနဖြိုးထားခစွမြှတနြိုးတဲ့ ပုဂံကတော့ အခုဆိုရငြ ကမျဘာ့အမှအနှေစစြာရငြးဝငသြှားခဲ့ပါပှီ။တစနြိုငငြံ လုံး ကလညြး အရမြးကို ပွောရြှငနြကှပေါတယြ။အဇာဘိုငဂြနွမြှာ ကငြွးပတဲ့ ၄၃ ကှိမမြှောကြ ယူနကစြကိုအစညြး အဝေးကိုတော့ ပရိသတတြှရေဲ့ အခစွတြော မအေးသောငြးက တကရြောကခြဲ့ပါတယြ။ပွောစြရာ သတငြးကော ငြးကို လညြး မအေးသောငြးက သူမရဲ့ fb မှာရှယထြားပါတယြ။အစညြး အဝေးတကရြောကဖြှစတြဲ့ မှတတြေမြးပုံတှကေို တောကလြွောကတြငထြားပါတယြ။
၄၃ ကှိမမြှောကြ ယူနကစြကို
မှနမြာတှရေဲ့ နှလုံးသားထဲက ပုဂံရဲ့
အကောငြးဆုံးသတငြးကိုလညြးရငခြုနနြပေါတယြ…” ဆိုပှီး သူမရဲ့ အကောငြ့မြှာ တငထြားခဲ့တာပါ။
ကမျဘာ့အမှအနှေစအြဖှစြ ကှညောခဲ့တဲ့ နလေ့ေးမှာတော့ မအေးသောငြးက ပုဂံရဲ့ အငှအေ့သကတြှေ လှမြး ခှုံ နတေဲ့ ဝတစြုံလေးကို ဝတဆြငပြှီး တကရြောကခြဲ့တာပါ။မအေးသောငြးကလညြး အရမြးတှေ ပွောပြှီး အမှတတြရ ပုံလေးတှေ ကို သူမရဲ့အကောငြ့မှာ ဝမွှခေဲ့ပါတယြ။အဲ့ဒီအထဲမှာ အလံက အပေါအြောကပြှောငြးပှနြ ဖှစနြတောကို မှငလြိုကြ မိတဲ့ သူတစခြွို့က ဘာကှောငြ့ အခုလို ပှောငြးပှနဖြှစရြတာလဲ ဆိုပှီး ဝဖနေခြဲ့ပါတယြ။ဒီလို ပှောဆို ဝဖနြေ မှုတှေ ကို မအေး သောငြးက Comment မှာ အခုလို ပှနရြှငြးပှခဲ့ပါတယြ။
Pin Type ရငထြိုးကှောငြ့ပါ။
မမှောကခြငမြှာတောငြ အလံကို ပေါငပြေါတြငမြထားတာတို့
အဝါကိုအပေါဘြကမြမှားအောငတြို့ကို တအားဂရုစိုကပြီး လုပခြဲ့တဲ့သူတှပေါ….” ဆိုပှီး အခုလို ဖှစရြတာဟာ Pin Type ရငထြိုးကှောငြ့ပါ လို့ သခွော ပှနရြှငြးပှခဲ့ပါတယြ။
ဝတ်မှုန်ရွှေရည် ဘယ်ပွဲမှာမဆို အလှဆုံးမင်းသမီးလေးအဖြစ် တောက်ပနေတဲ့ပုံရိပ်…..
မိုးတွင်း၌စိုးရိမ်ရသည့်ကူးစက်ရောဂါ ၄ မျိုးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်….